Usashandise zvakawanda paWebhu Rako Dhizaini | Martech Zone
Mugovera, July 4, 2009 China, June 29, 2017 Douglas Karr
Vazhinji shamwari dzangu vagadziri vewebhu - uye ndinovimba havagumbuke pane ino posvo. Kutanga, rega nditange nekutaura kuti rakakura webhu dhizaini rinogona kukanganisa maitiro erudzi rwevatengi vaunokwezva, iwo mamitero ekupindura kwetarisiro kudzvanya kuburikidza, pamwe nemari yese yekambani yako.
Kana iwe uchitenda chigadzirwa hombe kana chikuru zvemukati zvinokwanisa kukunda zvakashata dhizaini, warasika. Iyo dzoka mukudyara pamadhizaini makuru yakaratidzwa kakawanda. Zvakakosha zvachose nguva nemari.
Izvo zvakati ... dhizaini hombe haifanire kukubhadharira iyo yakawanda, zvakadaro. Yemazuva ano webhu zvemukati manejimendi manejimendi masisitimu akadai se WordPress, Drupal, Django, Joomla, Magento (yezvokutengeserana), Tsananguro Injini, nezvimwewo zvese zvine engineti dzakakura. Kune zvakare akawanda webhu dhizaini masisitimu, senge YUI Grids CSS, Yemasaiti akagadzirwa kubva pakutanga.
Mukana wekushandisa masisitimu aya ndewekuti iwe unogona chengetedza zvakawanda yewebhu yako uye graphic dhizaini nguva. Unyanzvi hwewebhu dhizaini inogona kudhura $ 2,500 kusvika $ 10,000 (kana zvimwe zvichienderana nepotfolio uye mareferenzi esangano). Yakawanda yenguva iyoyo inogona kushandiswa mukumisikidza kurongeka kwemapeji neCSS.
Panzvimbo pekubhadhara marongero neCSS, wadii kusarudza kubva kuzviuru zvemadingindira akavakwa uye kungoita kuti graphic mugadziri ashande pa graphical dhizaini? Kuputsa dhizaini huru yakavakwa mu Photoshop kana Illustrator uye kuiisa kune iripo theme inotora chidimbu chenguva pane kugadzira zvese kubva pakutanga.
Imwe bhenefiti yekushandisa nzira iyi ndeyekuti marongero anogona kukanganisa injini yekutsvaga pamwe nekushandisa - chimwe chinhu icho vanogadzira theme vanowanzo chenjera vasati vaburitsa nekutengesa madingindira online. Sezvo vazhinji vevaverengi vangu vashandisi veWordPress, imwe yemasaiti andinoda kune iyi ndeye WooThemes. KwaJoomla, iyo RocketThemes ine yakasarudzika sarudzo.
Rimwezve zano, kana iwe Nyorera kana kutenga izvi zvinyorwa - ita shuwa kuti uwane rezinesi rekuvandudza. Iyo yekuvandudza rezinesi paWooThemes ingangoita zvakapetwa mutengo (ichiri kungotanga pa $ 150!). Izvi zvinokupa iwe chaicho Photoshop faira kuti upe yako graphic mugadziri wekugadzira nayo!
Tags: DjangodrupalTsananguro InjiniJoomlaMagentoroketiWordPressYahoo UIyui grid css
Jul 4, 2009 na7:33 PM
Ini ndinoda matemplate eCSS pa http://www.webassist.com. Zvakati wandei ndezvemahara, asi kune zvakare akawanda akawanda emuripo mudiki.
Jul 7, 2009 pa 1: 12 AM
Dzimwe nguva mawebhusaiti haaverenge kuti inguvai yekudzokorora vhiri. Kushandisa matemplate uye kugadzirira kuenda Themes ihombe uye dzimwe nguva MAHARA mukana. Ingoshandisa!
Great Post. Tichadzoka kune imwe update.
Jul 8, 2009 pa 12: 47 AM
Ini ndinobvumirana zvachose pane izvi. Sekambani yakavakirwa padhizaini tinoedza kushandisa madingindira pamwe nekodhi kodhi kudhura iyo webhusaiti dhizaini pasi zvakachipa sezvinobvira.
Jul 10, 2009 pa 4: 13 AM
Ndinofunga zvinoenderana nekambani iyo saiti iri kugadzirirwa.
Ini ndinobvuma kuti kune akawanda makuru matemplate kunze uko anogona kuita kuti zvikwanise kugadzira webhusaiti inotaridzika zvakanaka pane zvakachipa. Heck, yangu blog ndeye 100% template uye ndinoida!
Nekudaro, template inogona kusagara ichishandira yakakura, ine hunyanzvi kambani kana imwe ine zvidikanwi izvo saiti yetemplate ingasagadzirisa.
Sezvingatarisirwa, ndinorerekera sezvo sangano rangu richigadzira "anodhura" akagadzirwa mawebhusaiti 🙂
Nekudaro, takaedza munguva yakapfuura kushandisa matemplate evatengi vedu uye kazhinji yenguva, ivo vanoda kuigadzirisa, kuichinja, uye "kuita kuti ive yakasiyana" uye inoguma yave tsika dhizaini zvakadaro.
Pamusoro pezvo, isu tinotarisira zvikuru kuona kuti mhando yekambani inoratidzwa nemazvo mumagadzirirwo ewebhusaiti. Izvi hazviitike nyore kana uchishandisa matemplate.
Chekupedzisira, vazhinji vevatengi vedu vari kushandisa chaiwo mawebhusaiti pasaiti yavo sekunyoresa chiitiko, yakaoma zvigadzirwa makatalogi, uye zvekushambadzira maturusi ekubata mishandirapamwe. Madhipatimendi ekushambadzira mumakambani akadai ari kutsamira kwatiri kugadzira webhusaiti iyo iri seamless yekuwedzera yeiyo iripo brand brand. Saiti dzakaita seizvi dzinoda hunyanzvi uye polish kuti ive nechokwadi chekuti zvikamu izvi zvakabatanidzwa zvisina musono uye handinzwe kuti template inogutsa mune idzi kesi.
Iyo "inodhura" saiti yetsika kune wese munhu? Kwete. Zvisinei, iva nechokwadi chekuziva mutengi wako. Dzimwe nguva template yakanaka. Dzimwe nguva, zvakakosha imwe nguva uye mari yekudyara kugadzira saiti yakasarudzika inonyatsoratidza mhando yekambani.